နေပြည်တော် အာဟာရ သုခဈေးမှ ဒေသထွက် စားပြောင်းများ နေ့စဉ် ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေးအပါအ?? - Yangon Media Group
နေပြည်တော် အာဟာရ သုခဈေးမှ ဒေသထွက် စားပြောင်းများ နေ့စဉ် ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေးအပါအ??
နေပြည်တော် အာဟာရသုခဈေးမှ စားပြောင်း (သကြားပြောင်း-အဝါ၊ ပန်ဂျိန် ပြောင်း-အဖြူ၊ အနီရောရာ၊ ထော ပတ်ပြောင်း) များကို ဈေးကွက်မှ နေ့စဉ် ရန်ကုန်မြို့ဘုရင့်နောင် ဈေးသို့ ခြောက်ဘီးကားလေးစီး၊ ငါးစီးခန့် တင်ပို့လျက်ရှိရာ ခြောက် ဘီးကားတစ်စီးလျှင် ပြောင်းဖူး အဖူးရေ နှစ်သိန်းခန့်ဆန့်ပြီး ရန် ကုန်ဈေးကွက်သို့ နေ့စဉ်စားပြောင်း ဖူး ဆယ်သိန်းကျော် တင်ပို့ရောင်း ချမှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် အာဟာရသုခ ဈေးမှ ပြောင်းဖူးကုန်သည် ကိုဖိုး ထောင်က ”စားပြောင်းအရောင်း အဝယ်ဈေးကွက် အကောင်းဆုံး အချိန်ကတော့ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလတွေမှာ ပြောင်း ဈေးကောင်းသွားပြီး နေ့စဉ် အာဟာ ရသုခဈေးကို ဖောကားတွေနဲ့ ဈေး ကွက်လာချရောင်းတာပဲ။ နေ့စဉ် အာဟာရသုခဈေးမှာ ဈေးကွက်ထဲ ရောက်လာတဲ့ စားပြောင်းဖူးရေ ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ ဝယ်တဲ့သူကတော့ ဗြောက်သောက် ပေါ့။ ဟိုက အဖူး ၁ဝဝ ဝယ်သွား လိုက်၊ အဖူး ၂ဝဝ ဝယ်သွားလိုက် ပေါ့။ အဖူး ၂ဝဝဝ၊ ၃ဝဝဝ ဝယ် သွားလိုက်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင် ဈေးကိုသွားတယ်။ မန္တလေး၊ မူ ဆယ်သွားတယ်။ ဈေးကွက်ရှိရာ ကို တင်ပို့ရောင်းချတာပဲ။ အခု အရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်ဖြစ်နေ တာက စားပြောင်းတွေကို အဝေး ပို့တဲ့ကုန်သည်တွေ မမြတ်ဘူး။ ရှုံး တယ်။ ယခုနှစ် စားပြောင်းမျိုးစေ့ ဈေးနှုန်းက ခြောက်ပြည်အိတ်တစ် အိတ်ကို ငွေကျပ်ရှစ်သောင်းက ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ ၁၂ ရာသီ ရေတွင်းတွေတူးစိုက်ပျိုး တာ ဈေးကွက်မှာ နေ့စဉ်အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေတာပဲ”ဟုပြောသည်။
ယမန်နှစ်က စားပြောင်း ပြောင်း ဖူး ၁ဝဝ လျှင် ငွေကျပ် ၁၅ဝဝဝ ဈေး ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ငွေကျပ် ၇ဝဝဝ၊ ၈ဝဝဝ ဈေးသာရှိသည့်အတွက် စားပြောင်းဈေးကွက် ကျဆင်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပြောင်းများသည် လယ်ဝေးမြို့နယ် ဗောဓိက သဲကော ကြီးကျေးရွာများ၊ ပျဉ်းမနားမြို့အ ရှေ့ဘက် ကျောက်ချက် အလည် ရွာ၊ ရွာသစ်၊ ဘုန်းကြီးကုန်းရွာ၊ သာဝတ္တိ၊ ဧလာ၊ ရေနီမြို့များတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော် ဝါရီလပိုင်းက တောင်ငူမြို့နယ်ဒေ သထွက်စားပြောင်းများ ဈေးကွက် ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် စားပြောင်း ဈေးကွက်ကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ လူထုတွေ့ဆုံပွဲကို ဧပြီ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက် အထိ ကျင်းပမည်
မဏ္ဍပ်များ၌ အလုံပိတ် အခန်းငယ်များ ထည့်သွင်း ဆောက်လုပ်ထားပါက မဏ္ဍပ် တာဝန်ရှိသူများကို မန်းစည်ပ??
အသက် ၈ဝ နှင့်အထက် ဘိုးဘွားများကို လူမှုရေးပင်စင်ပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်